ဥရောပ ချက်သမ္မတနိုင်ငံ ပရာ့ဂ်
ပရာ့ဂ်အချစ်ဇာတ်လမ်း၏ search အတွက်စုံတွဲများအဘို့အရှေ့ဥရောပတစ်ဦးဖြစ်ကောင်းအကောင်းဆုံးကိုမြို့ဖြစ်သည်။ အဲဒီမှာဂီတသမိုင်းနှင့်အတူလေထုထဲတွင်င်, မြို့ရဲ့အနုပညာ, ဗိသုကာ, နှင့်ယဉ်ကျေးမှုဗဒေ။ Mala Strana ထံမှဟောငျးမြို့ရန် Castle ခရိုင်မှတိုင်းခရိုင်, ၌, သငျသညျချစ်သူများများအတွက်ကြိုဆိုဖျာထွက်ထားကြောင်းဟိုတယ်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ အကောင်းဆုံးပရာ့ဂ်ဟိုတယ်များ၏ဤစာရင်းထဲက Choose နှင့်သင်သွားရောက်ကြည့်ရှုသည့်အခါစိတ်ပျက်ရှောင်ရှားရန်ရှေ့ဆက်စာအုပ်ဆိုင်။
ပရာ့ဂ်၌ပါသမျှသောဟိုတယ်များ၏, ထို Four Seasons သူတို့တိုင်းတာရပါမည်သည့်ဆန့်ကျင်ရွှေကိုစံဖြစ်ပါတယ်။ ချားလ်စ်တံတားနှင့် Vltava မြစ်အပေါ်စီးက၎င်း၏အခွင့်ထူးခံတည်နေရာကနေ, ကလည်းမွို့၌မဆိုဟိုတယ်၏ပရာ့ဂ် Castle ရဲ့အကောင်းဆုံးအမြင်များရှိပါတယ်။ Four Seasons ပရာ့ဂ်ရဲ့ယင်း၏ကုန်ကြမ်းဘားနှင့်အတူ CottoCrudo စားသောက်ဆိုင်, mozzarella ဘား, လောလောလတ်လတ်မီးဖုတ်ထားသောမုန့်နှင့်ဖန်တီးမှုကော့တေးခေတ်သစ်မြေထဲ / အီတလီခကျေနပ်ထက်ပိုပေးပါသည်။ နှင့်၎င်း၏တနင်္ဂနွေမနက်လည်စာမှာပျော်မွေ့စရာများခင်းကျင်းလွဲချော်ခံရဖို့မပေးပါ။ ဒီလက်ရာမြောက်သောပိုင်ဆိုင်မှုကြုံတွေ့င့်တဲ့သူစုံတွဲများလည်းစဉ်းစားဟန်နှင့်ထောက်ထားဝန်ဆောင်မှုကိုခြီးမှမျး။
, ပြောင်မြောက် chic နှင့်ခေတ်မီခြင်း, Mandarin Oriental ပရာ့ဂ်ခကျြကျက်သရေနှင့်အတူအာရှအေးမြပေါင်းစပ်။ အဆိုပါ Mala Strana ခရိုင်တွင်တည်ရှိပြီး, အကြော့ Mandarin Oriental ပရာ့ဂ်မြို့လုံးရဲ့အဓိကဆွဲဆောင်မှု၏လမ်းလျှောက်အကွာအဝေးအတွင်းဖြစ်ပါတယ်။ Gothic အဘိဓါန်, Renaissance နှင့်ဘားရို့အဆောက်အဦများထည့်သွင်းထားတဲ့ဟိုတယ်, တစ်ချိန်ကဒိုမီနီကန်ဘုန်းကြီးကျောင်းသျောနှင့်ဟိုတယ်ဧည့်သည်များအနေဖြင့်ဆိတ်ကွယ်ရာတစ်ခုတက်ကြွ refectory ထိန်းသိမ်းထားသည်။ အဆိုပါ Mandarin Oriental ပရာ့ဂ်ကိုလည်းမြို့အတွက်အကောင်းဆုံး-rated spa မှမူလနေရာဖြစ်သည်။
ပရာ့ဂ်၌အနောက်ဆုံးပေါ်ဆုံးနဲ့ခေတ်မီဟိုတယ်များ၏တဦးတည်းဖြစ်ခြင်းနေသော်လည်းအဆိုပါသြဂတ်ဆယ်သုံးရာစုစိန့်သောမတ်စ်ဘုန်းကြီးကျောင်းနှင့်ယျြဘုရားကျောင်းပူးတွဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့အိပ်ခန်းပြတင်းပေါက်မှတဆင့်ဖွင့်ကိုကြည့်: မြို့တော်ရဲ့အနီရောင်-tiled ရရှိနိုင်ရန်အိမ်ခေါင်မိုးထက်ကျော်လွန်အဆိုပါမြင်ကွင်းကိုပရာ့ဂ် Castle မှတက်သမျှသောလမ်းတက်လေ့ရှိသည်။
ဂီတသငျသညျစွဲအပေါ်အကောင်းဆုံးနှင့်နယ်နိမိတ်နှစ်သက်သောအမှုအရာတို့တွင်လျှင်သင်အပြည့်အဝ-Aria ဟိုတယ်, အသံများနှင့်သီချင်းဆိုခြင်းဖြင့်ထူးဆန်းနေကြသည်သောသူတို့အဘို့ဆိပ်မှာစိတ်အားထက်သန်မှုလုပ်ကြနိုင်ပါတယ်။ ဂန္သို့မဟုတ်ခေတ်ပြိုင်, jazz, အော်ပရာ: ဟိုတယ်ရဲ့အလေးကြမ်းပြင်တစ်ခုချင်းစီဟာကွဲပြားခြားနားတဲ့ဂီတအမျိုးအစားမှမြှုပ်နှံနေသည်။ သို့သျောလညျး Romantic '' နှလုံးသားများသီခငျြးဆိုစေမည်သောအစက်အပြောက်ညအချိန်တွင်တက် lit မြို့သူမြို့သားတစ်ဦးဆွန်း-ထိုက်တန်မြင်ကွင်းကျယ်ကိုပူဇော်သက္ကာဘို့, ဟိုတယ်ရဲ့ခေါင်မိုးပေါ်ဘေးမှာစားသောက်ဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်။
ရထားရုံတစ်နာရီပရာ့ဂ်၏အပြင်ဘက်တွင်တစ် posh ဟိုတယ်သို့ကူးပြောင်းခဲ့တစ်ဦးကအမဲလိုက်အိပ်, Chateau Mcely အပန်းဖြေခြင်းနှင့်အချစ်ဇာတ်လမ်း၏ search အတွက်စုံတွဲများအတွက်အကောင်းဆုံးဖယျရှားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ကျေးလက်ဒေသတွင်ရက်အနည်းငယ်နှင့်သင်၏ပရာ့ဂ်အပန်းဖြေချိန်စဉ်းစားပါ။
Carol Cuddy ©။
အဆိုပါ touristy Nebozizek စားသောက်ဆိုင်, ပရာ့ဂ် Castle မှတက်တစ်ဝက်လမ်း, ဒီတိုက်ခန်းကိုဟိုတယ်မြင့်သောတက်ကနေမြို့အမြင်များအတွက်ယူမယ့်ဒဏ်ငွေ aerie ထောက်ပံ့ကပ်လျက်။ အဆိုပါကြိုးဆွဲရထားပေါ်မှာတက်စီး; ဒါကြောင့်ဟိုတယ်ကိုဝေးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ နေ့လယ်စာပြီးနောက်, Castle အထိဆက်လက်သို့မဟုတ် parkland မှတဆင့်ဆင်းလှည့်လည်။ သို့သော်အစောပိုင်းအိမ်ပြန်ရ; အဆိုပါဓာတ်လှေကား9pm မှာအလုပ်လုပ်နေရပ်လိုက်နိုင်သည်။
သငျသညျပရာ့ဂ် Castle နီးစပ်သူဖြစ်လိုပါကရွှေကောင်းပြီတည်နေရာနဲ့အချစ်ဇာတ်လမ်းပေါင်းစပ်တဲ့ဟိုတယ်အဘို့သင့်ကိုအကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ nice ထိလက်ဖက်ရည်သို့မဟုတ်ကော်ဖီနှင့်လောလောလတ်လတ်မီးဖုတ်ထားသော pastries ဖြင့်လိုက်ပါသွားဆိုက်ရောက်အပေါ်သို့စပျစ်ရည်ကိုတစ်ပုလင်းနှင့်တစ်ဦးအတွက်နှိုးဆော်ချက်များပါဝင်သည်။
အဆိုပါ Mala Strana ခရိုင်မှာခမ်းနားထည်ဝါ Alchymist ၎င်း၏အမည်ကိုမှတက်အသက်ရှင်တော်မူသည်; ကအချစ်ဇာတ်လမ်းအဘို့မြို့ထဲတွင်အကောင်းဆုံးဇိမ်ခံဟိုတယ်များ၏တဦးတည်းသို့ 500 နှစ်အရွယ်နန်းတော်ကူးပြောင်း။ valence နှင့်အတူ festooned လေးပိုစတာအပါအဝင်ကုတင်, မေတ္တာ၌စုံတွဲများများအတွက်စံပြဖြစ်ကြသည်။ ဤသည်ဟိုတယ်ကိုလည်းတစ်ဦးမိုးလုံလေလုံရေကူးကန်ပါရှိပါတယ်။
ပရာ့ဂ် Castle ဧရိယာ၌တက်မြင့်မားသော, Domus Henrici စင်ကြယ်သောခေတ်မီဒီဇိုင်းနှင့်ယူနက်စကိုစာရင်းကမ္ဘာအမွေအနှစ်များအတွင်းထူးခြားတဲ့တည်နေရာတန်ဖိုးထားသောစုံတွဲများအတွက်အကောင်းဆုံးဟိုတယ်ဖြစ်နိုင်သည်။ ဒီရင်းနှီးရှစ်ခန်းပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုမှာဧည့်သည်ခန်းကိုချွတ်တောင်ဘက်-facing ကျန်ကြွင်းသောအရပ် မှစ. , မြို့သငျသညျကိုအောက်တွင်ထုတ်ပြန့်နှံ့။
ရုံဟောငျးမြို့ရင်ပြင်နောက်ကွယ်မှတည်ရှိပြီး, ဒီစတိုင်ဟိုတယ်ပရာ့ဂ်ရဲ့အကောင်းဆုံးပြတိုက်နှင့်လူကြိုက်အများဆုံးမြင်ကွင်းများ, စားသောက်ဆိုင်များ, နှင့်အော်ပရာနှင့်ဖျော်ဖြေပွဲခန်းမမှလမ်းလျှောက်အကွာအဝေးအတွင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်မှာအဆန်းဟိုတယ်ဟာဇင်စီးတီး Spa နှင့် Flotation Center ကထည့်သွင်း။
ဇူလိုင်လအတွက်ပရာ့ဂ်: ကောင်းမွန်သောမိုးလေဝသ, Big လူအုပ်
ပရာ့ဂ်၌အ Halada လက်ဝတ်ရတနာ Stores
Instagram ကို Accounts ကိုအိုလံပစ်ပွဲတော်ကာလအတွင်း Watch မှ
သင့်ရဲ့ခရီးသွားအာမခံအရေးဆိုမှု Denied ခံရမှာကိုဘယ်မှာသုံးအခြေအနေများ
အဘယ်အရာကို Rio de Janeiro မြို့အတွက်စားရန်
ထိပ်တန်း Philadelphia တွင်-ဧရိယာဥယျာဉ်နှင့်ရုက္ခဗေဒဥယျာဥ်
Universal Orlando တွင်မှာလေးအတွက်အသင့်တော်များအတွက်ထိပ်တန်း5အစွန်းအကွက်
Limoges မှလန်ဒန်, ဗြိတိန်နှင့်ပြင်သစ်နိုင်ငံပဲရစ်ကနေရဖို့ကိုဘယ်လို
သန်း 39 ကျော်ပြည်သူ့သင်ကသငျ့, တစ်ခုချင်းစီကိုတစ်နှစ်တာဤတွင် Go?
တောင်ပိုင်း Devon အတွက် Dartmouth ၏ရုပ်ပုံများ
Bun Pi မိုင် - လာအိုနှစ်သစ်ကူးကိုဂုဏ်ပြုသော